Safiirka Soomaaliya ee Talyaaniga oo ka tacsiyeeyay dadkii ku geeriyooday weerarkii Hotel Maka Al-Mukarama – Radio Muqdisho
Safiirka Soomaaliya ee Talyaaniga oo ka tacsiyeeyay dadkii ku geeriyooday weerarkii Hotel Maka Al-Mukarama
Roma. 28.March. 2015 ….Safiirka Dowladda Soomaaliya u fadhiya dalka Talyaaniga Danjire Muuse Xasan Cabdulle oo maanta War qoraal ah kasoo saaray Xafiiskiisa ayaa si kulul u cambaareeyey weerarkii wuxuushnimada ahaa ee Maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab ku qaadeen Hoteelka Makka Al-mukarramaha ee magaalada Mudisho, kaasoo ay ku laayeen dad u badnaa shacab oo ku sugnaa gudaha hoteelka.
Danjiraha ayaa ugu horeyn isagoo ku hadlaya magaca safaaradda ,howlwadeennada iyo Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Talyaaniga tacsi ugu diray shaciga Soomaaliyeed ee ku geeriyoodey weerarkaasi, waxa uuna Alle uga baryey kuwii ku dhaawacmay inuu Eebbe si deg deg ah u bogsiiyo.
Safiir Muuse Xasan ayaa si gaar ah tacsi ugu direy ehellada iyo dhammaan Ummadda Soomaliyeed ee uu ka geeriyoodey danjirihi Soomaaliya u fadhiyey xarunta xuquuqda Aadanaha Qaramada Midoobey ee Genève, Marxuun Yuusuf Bari bari oo kamid ahaa dadkii ku dhintay weerarka hotelka, waxa uuna ku amaanay safiirku inuu ahaa wadani jecel dalkiisa oo firfircoon, isla markaana si daacad ah ugu adeegi jiray bulshadiisa.
Ugu dambeynti Danjiraha Soomaaliya ee Talyaaniga Muuse Xasan Cabdulle ayaa ku ammaanay Ciidamada qalabka sida doorkii ay ka qaateen so afjarista howlgalki ay ka sameeyeen Hoteelka, kaasoo ay ku khaarijiyeen dhammaan dhagar qabayaashii ka dambeeyey fulinta weerarka iyo soo badbaadintii ay cadowga ka soo badbaadiyeen dad badan oo ku xayirnaa gudaha Hoteelkaas.
Shir looga hadlayay amniga Soomaaliya oo lagu soo gabo gabeeyay Denmark “SAWIRRO”
Safiirka Soomaaliya ee Suudaan oo ka qayb galay Dood cilmiyeed looga hadlayay dhibaatooyinka Tahriibka ”SAWIRO”
Safiirka Soomaaliya ee Suudaan oo ka qayb galay Dood cilmiyeed looga hadlayay dhibaatooyinka Tahriibka ''SAWIRO''